I-Quantum GIS, umbono wokuqala - iGeofumadas
Quantum GIS, umbono wokuqala
Julayi, 2009 Geospatial - GIS, I-GvSIG, kokuqala, qgis
Uma abangane be-gvSIG bagcina isithembiso sabo, ngoMsombuluko ozayo ngoJulayi 27 sizoba nesitebele esingu-1.9. Kuze kube manje ukuhlolwa kube kuhle, ngokusho kwevolumu ebonwa kwifayili ye- uhlu lokusabalalisa. Ngenkathi uMsombuluko ufika, lapho nginethemba lokuthola ukwaneliseka ngokuhalalisela ukuhambisana negama, ngilimaze ukungalali okuqinisekile abathuthukisi okufanele bakuthwale, ake sibheke i-Quantum GIS enjengale ngamehlo enyoni.
I-QGIS yathuthukiswa ku-C ++ kusetshenziswa i-Qt toolkit, isebenza ku-Windows, Mac ne-Linux. Iphrojekthi yavela ngoMeyi 2002, ngokwesekwa kwezilimi ezingama-26 kanti ilayisense yayo iGPL.
Sizolinga inguqulo ye-1.02 engishiyile ngokuphelele yanelisithuluzi samahhala, ingalandwa kusuka kulesi sixhumanisi futhi yilokho ikhasi elisemthethweni le-Qgis.
Ukubonakala kwe-Quantum GIS
I-iconography kanye ne-interface design iyona ehlengeka kakhulu, ayikuthinti ukusetshenziswa, kepha ithinta ukunambitheka kwezinkampani (kuyathengiswa) lapho ukunikela. Ukubukeka lokho Ngangigxeka ngaphambili ye-gvSIG, ngoba ngesikhathi esifanayo ukubukeka kwayo nokungafani kokudala kwakwenza umphathi angitshele "kubonakala sengathi uhlelo lwezilwane, ezinye izithonjana zibonakala zenziwe nge-Paintbrush ye-bits 8".
Kodwa kulokhu ubukhulu, I-QGIS inhle kakhulu, ngisho nokuchofoza okulula ongakhetha phakathi kwezingqikithi ezihlukahlukene ze-3 ze-iconography kahle kahle, ngokudlula igundane phezu kwesihloko kubonisa indlela i-interface ezobukeka ngayo.
Izici ezithakazelisayo ze-Quantum GIS
I-QGIS idinga iGrass ngemisebenzi eminingi lelo thuluzi elisungule kahle, inhle kakhulu ngokungaphindi imizamo. Lapho uqala i-QGIS futhi ungayitholi ifakiwe, iphakamisa isexwayiso; kulokhu ngenza isibuyekezo ngaphandle kokufaka i-Grass. Ngenkathi ngifuna ukulayisha idathasethi yeGrass, ngoba yayingafakwanga, uhlelo luvaliwe, ngakho-ke angincomi ukulusebenzisa ngaphandle kokufaka womabili amathuluzi.
Izinqamuleli, Imiyalo eminingi inencwadi eyabelwe, efana nokuthi umsebenzi ungalayishwa ngokucindezela le ncwadi. Lokhu kuyasebenza kakhulu, ngiyakhumbula ukuthi ku-AutoCAD bekungokunye kwamaqhinga amahle kakhulu lapho cishe yonke imiyalo yenziwa ngekhibhodi.
Ukubuka konke, kuphaneli yesobunxele imephu ebonisa indawo yokuthunyelwa, ngokuvumelanisa kuwo womabili amathrekhi. Ilusizo kakhulu, ungakhetha ukuthi iziphi izendlalelo ofuna ukuzibona ekubukweni konke, futhi ingaphonswa njengewindi ezintantayo ngosayizi ohlukile.
Uhlaka olusemaceleni, luhle nje, ungahudula ama-plugins njengamalebula ngaphambili, angenziwa entanta, futhi ngenkinobho elula yesokudla kusebenze noma kungasebenzi. Futhi ukuphathwa kobubanzi kulula ukuhudula hhayi kuphela kuphaneli yesobunxele kepha nakwaphansi.
Iphaneli eliphansi, lapho kukhonjiswa itafula lemfanelo, livela endaweni, kepha futhi lingantanta. Isebenza kahle kakhulu, inezinketho zokusondeza emigqeni ekhethiwe bese uguqula ububanzi bamakholomu ngokuhudula okulula kwegundane. Futhi kufreyimu engezansi inokusesha nokukhetha imisebenzi, efana nokuthi iManifold GIS yenza kanjani, ngaphandle kwebha yomumo elula.
Ukuvumelanisa kwalesi sikhombimsebenzisi esibonakalayo kusenza sisebenziseke kakhulu, amafrimu athambileyo angcono kakhulu, angikhumbuza kakhulu i-Microstation, ngoba ngenxa yalokho, ifasitelana lemfanelo lingaboniswa ngaphandle kokuthinta olunye umsebenzi.
Ukuhlaziywa kwedatha, inezici eziyisisekelo zokuziphendulela kanye nokucwaninga okungafunwa ngumuntu, ekuboneni kuqala kunezinye izici ezithakazelisayo kakhulu engizikhethayo ukubona esinye isikhathi, ngoba ama-plugin we-Ftools afaka ukufometha komhlaba, i-hydrological phakathi kwabanye.
Ama-plugin angeziweNjenganoma yiluphi uhlelo lokusebenza lwe-gpl, inzuzo yalo ikuma-plugins umphakathi awenza kancane kancane (yize kunenzuzo yokungabi seJava), ngokuzenzakalela kuletha izisekelo futhi zibonakala zimbalwa kepha azilula njengoba zibonakala: zingalayishwa Izendlalelo ze-WFS, ukuthekelisa iMapServer, bamba ukuxhumanisa, engeza izinsiza ekubukweni okufana nenyakatho, isikali nelungelo lobunikazi, umbhalo onqunywe ngamakhoma, une-dxf to shp converter, i-plugin ezithombeni ze-georeference, i-gps console, i-python console, i-coordinate mesh , njll. Kepha into enhle kakhulu inketho yokulayisha ama-plugins weGrass ayisihloko esihlukile. Ngokufana nokwenzeka nge-gvSIG ne-Sextante yize ukuvuthwa kwe-Grass kuhlonishwa, elinye lamathuluzi amadala we-GIS.
Ngokuthakazelisayo OGR lokuguqulela, ungakwazi ukuguqula izingqimba phakathi ngetakhiwo letehlukene, ezifana SHP, DGN, GPX, GML, CSV, KML, MapInfo futhi BD isikhala nge ODBC, MySQL, PostgreSQL, phakathi kwabanye.
Kokuhle kakhulu: i-dxf kuya ku-shp ne-kml kuya ku-dxf, eyisisekelo kodwa engenziwanga ngezinye izinhlelo zokukhokha.
Imisebenzi eyisisekeloNjengamanye amathuluzi, ungakha amabhukhimakhi ezindawo, amaqembu ezendlalelo, izingqimba zinokulawulwa okuncane nobukhulu bokusondeza, ukukhululeka kokungeza amasistimu wokuxhumanisa nokuqagela; uma kwenzeka kunezingqimba ze-shp, uma zine-prj, u-Qgis uhlenga lolu lwazi. Izinqubo eziningi zifaka ibha yenqubekela phambili, esicabanga ukuthi yinhle kakhulu.
Kuyathakazelisa ukuthi izimfanelo zezinto zilungiswa kanjani, ngoba kuphaneli efanayo kunamathebhu ezakhiwo ezijwayelekile, izimpawu, imethadatha, amalebula, izenzo kanye nezimpawu zamathebula; konke kungagcinwa njengesitayela se-.qml futhi kulayishwe ukuze kusetshenziswe kwezinye izingqimba. Futhi leli thebula liyantanta futhi ububanzi nokuphakama kwalo kungalungiswa ukunambitha. Ngisho nale phaneli namanye angavulwa njengohlelo lokusebenza oluhlukile.
Iphinde igxile ekusebenzeni okubonakala kubonakala kulula kodwa kunomsebenzi omkhulu, njengokulinganisa kwemikhawulo eqhubekayo, eboniswa kwipaneli yamathebhu, efaka ibanga lesigaba ngasinye.
Ukufinyelela nokuhlela idatha
Ungalayisha i-vector data shp, gml, Mapinfo ne-ddf, yize idatha evela kwamanye amafomethi ingaguqulwa ngesiguquli se-OGR. Ngokwengeziwe izingqimba ze-vector nge-WFS ne-PostGIS. Ukuhlenga, kukuvumela ukuthi ucacise ukufaka ikhodi kuhlamvu lapho ulayisha isendlalelo.
Ngokuqondene nezendlalelo ze-raster, isekela okuningi, ngaphandle kwe-WMS. Ukwengeza, kuhlanganisa ukufunda ama-OGC WFS, WCS, CAT, SFS, namazinga we-GML.
Ukwakha izendlalelo ezintsha zama-vector zingenziwa ngamafayela womumo we-OGR noma ngeGrass. Amaphrojekthi agcinwa njengeXML enwetshiwe ngama-qgs, lapho ukuhlelwa kwesitayela se-gvSIG kugcinwa khona.
Ngokuqondene nokuhlelwa kwedatha, imininingwane efana nohlelo lokuxhumanisa, amayunithi, ukunemba kwedesimali, ukunika amandla ukuhlelwa kwe-topological, imvume noma umkhawulo wamapholigoni agqagqene kwisendlalelo esifanayo nezimo ze-snap (uhlobo ukubekezelelana) kusendlalelo ngasinye esitholakala kuphrojekthi. Lokhu kwamuva kuyathakazelisa, noma ngabe ngidumele ukuthi inesigaba kanye nenketho ye-vertex kuphela. Ngiyagcizelela, iGrass kumele ibe yisizathu salokhu.
Ngazama ukuhlela ungqimba, ngifaka i-vertex, kodwa ngithole ukuthi ihamba kancane, ngaphandle kokuthi kwakudingeka ukuthi ungeze izinketho zokuchofoza (ngiyaxolisa ngokuzikhukhumeza kwami, kungowokuqala ngidlala le thoyizi). Ngizoyibona ngemuva kokuthi ngilayishe amathuluzi wokuhlela weGrass. Futhi akubonakali kunethrekhi uma abaningana behlela isendlalelo ngasikhathi sinye, noma ngubani osindisa kuqala ukunqoba. ugh!
Ngezinhloso zokukhipha okusheshayo, kunenketho yokonga ukubuka njengesithombe, ne-plugin yokuphrinta okusheshayo, kepha ngokungafani ne-gvSIG, ayinayo isilawuli sesakhiwo sesitayela se-ArcView; kepha umqambi wokuphrinta obonakala ethathwe kancane ezinweleni, yize kuvumela ukulayisha amafreyimu edatha, amalebula, amabhokisi nezimpawu, nokwenziwa okuningana kungadalelwa iphrojekthi, angitholanga ukuthi ngingazigcina kanjani njengezifanekiso; imanuwali ithi kungenzeka. Ngicabanga ukuthi kukhona izinto ezingcono kuma-Grass plugins ngalezi zinhloso.
I-Quantum gis ne-ArcGIS
Yebo, ngemuva komhlaka olandelayo.
DGN GPS utshani I-GvSIG OS KML kml ukuya ku-dxf GIS ezininginingi mapserver umbono wami wokuqala shp
Thumela Previous«Langaphambilini Ukuhlolwa kwe-cadastral
Post Next Abapheli be-28 bezimvelo zemveloOkulandelayo »
Izimpendulo ze-28 ku- "Quantum GIS, umbono wokuqala"
U-Arnold Fernández Rivas uthi:
Novemba, i-2012 ku
Sawubona, ngiyaqonda ukuthi kungamahhala, kodwa akuyona ingxenye ye-Qgis futhi akusiyo i-Free Software ngakho kungaba ukuhlakanipha ukubeka lokho kubhulogi kubhulogi. Emva kwakho konke kubonakala sengathi konke okulungile kulungile.
Jose Guerrero uthi:
Nakhu okufana nalokho okufunayo:
Alan S ' uthi:
Umbuzo wami umayelana notshani nama-qgis, bengilokhu ngiya kuwo womabili ama-software kepha nginenkinga futhi angazi noma ngabe kukhawulela uhlelo noma kukhawulelwe kolwazi engxenyeni yami, umbuzo uwukuthi, ingabe ama-qgis noma utshani bunemodyuli ephelele yokuhlela ? Ngiqonde ukusho lapho zenziwa zisebenze khona, noma ukuthi zenziwa kanjani, ngokwesibonelo, ukuqedela ngokuzenzakalela ipholigoni ngomakhelwane, into ehlobene nalolo hlobo lwento
NgoJanuwari, i-2012 ku
Ingabe kukhona ithuba lokwenza i-buffer eminingi ne-qgis 1.7?
I-AutoDesk inehlelo lokusebenza olulanda mahhala, libizwa ngokuthi yiqinisoBuka, ngalokhu ungaguqula ifayela le-dwg kufomethi ye-dxf
Ngibhala ngoba ngithole leli kheli leviki leVenenux lapho kuthiwa:
dwg: Ifomethi ye-Autodesk eyimfihlo, engasekelwa yi-Quantum GIS / GRASS GIS.
Sawubona ozakwabo, umbuzo yilokhu okulandelayo, ngingakuvula kanjani amafayela we-.dwg wezandiso ku-Quantum Gis? I-plugin Dxf2Shp kuphela ibhekisela kuhlobo lwe-dxf.
Okthoba, i-2011 ku
Lezi zinhlelo zifunde amafayili wohlobo lwefayela lomumo, uma kungale fomu unemininingwane ye-ArcGIS. Okufanele ukwenze ukwakha kabusha i-mxd ngephrojekthi efanayo.
Uma idatha yakho isendaweni ye-geodatabase, ungayifaka futhi.
ubusuku obuhle ongangisiza ukuthi ngisuke ku-ArcGis ngiye eKosmo noma i-gvsig noma ithuluzi elithile lamahhala, ngilidinga ngokuphuthumayo ngoba livusa ukuphela kwendaba ngibonga kakhulu.
i-imeyili yami ocampogiraldo@gmail.com
NgoSeptemba, i-2011 ku
Ngiskena ama-polygons ukuskena usebenzisa i-orthophoto ye-WMS njengesisekelo.
i-gvSIG: Isithombe sithwala ngokushesha, kodwa ukusondeza lapho kuhamba nge-orthophoto kuyinkinga
I-Kosmo: Isithombe sithwala kancane kancane, nakuba kubonakala kukhululekile ukugcizelela
I-QGIS: Efana neKosmo, okulula kakhulu ukuyi digitize, isithombe singathatha iminyaka ukulayisha.
Iyiphi inkinga ingaba khona ngayinye?
NgoSeptemba, i-2010 ku
Iphrojekthi yeQuantum GIS enwetshelwa ama-qgs ayiqukethe lutho, nje ireferensi ezingqendweni ezibizwayo. Ngakho-ke okudingayo ukubona ukuthi ungaziguqula kanjani lezo zingqimba, ezingaba ngamafayela wokubumba ukuze anciphe noma abe yi-dxf.
Ukhona owaziyo ukuthi ngingadlulisa kanjani ifayela le-quantum ku-AutoCAD?
UChristian Gallor uthi:
Agasti, i-2010 ku
ukulanda imidwebo ye-cartography yaseSpain ungasebenzisa i-osm
Ngenza inkambo ye-GIS e-inthanethi esimweni sextant kosmo. Futhi ngibhekene nenkinga encane. Uma nginikeza noma yiluphi uhlelo lokusebenza oluhlose ukudala ungqimba we-raster, ngivala uhlelo.
Ingabe kukhona umuntu onomuzwa wokuthi kungani kungaba khona?
Disemba, i-2009 ku
Ngingathanda ukwazi ukuthi ungathola kuphi i-CARTOGRAPHY e-DIGITALIZED yaseSpain (ikakhulukazi esuka ku-Valencia) ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ngohlelo lwe-QUANTUM GIS.
Ngiyacela, uma uneminye imininingwane, ungazise ... ngilahlekile kancane ...
Okthoba, i-2009 ku
Ngiyabonga, futhi abazi ukuthi uma uhlela ukwengeza module ukuba ibukwe ngaphandle tenr kudlule shapefile kusukela amalebuli izingqimba izinhlobo imigqa, amaphuzu, ngemapholigoni futhi amalebula ku izingqimba ezahlukene, ngokuvamile kudinga buka kuphela futhi owenza lezi izinyathelo esithathwayo
Kufanele uyiguqule ukuze uhlele ifayela, uya kuma-Plugin, bese ukhetha i-dxf2shp
Ukhona owaziyo ukuthi ngingavula kanjani amafayela we-dwg ne-dxf ku-quantum gis?
Kufanele uchaze inkinga yakho ngaphezulu:
Uyazi ukuthi ungalayisha kanjani ungqimba we-kml?
Layisha ungqimba ephaneli elihlangothini kodwa awuboni izinto?
Angikwazi ukungena kumafayela we-kml kusuka ku-5.0 inguqulo ye-google komhlaba aquantum gis noma ubani ongangisiza ukuthi i-quantum gis ver i-1.2
Yebo, bayabasekela. Ngomqondo wokude, i-Qgis isebenza kahle kakhulu nge-Grass ne-gvSIG ene-Sextant.
hol, bengifuna ukwazi ukuthi ngabe lezi zinhlelo ezinjenge-Qgis, gvgis noma utshani zisekela amafayili ezentengiso (shp, tab …….) futhi zingaphathwa yini ukuze zizwele kude?
Sawubona, ngingumfundi weGeomatics career, ngithe ngiphequlula nje ngithole ngale nguqulo entsha emahhala futhi engayithatha yonke indawo nge-USB, yeka indlela enhle kubafundi engiyisho ngayo njengomfundi futhi ngiyazithanda izinhlobo ezintathu zamathuluzi kepha ngaphezulu i-QGIS leyo efana ne-Argis futhi enhle endabeni yokwenza i-geoprocessing ngingenza kuphela ikhala le-buffer elula uma kukhona inketho lapho ngingenza khona i-buffer eminingi ... bona ukuthi ungithumela yini izibonelo zokuthi ungalanda kanjani izithombe kusuka ku-google Earth enamagama ye-avenida..izincwadi ..
NgoSeptemba, i-2009 ku
Ngenxa yalokhu uya:
I-add-ons / i-OGR yomguquleli / sebenzisa umguquli we-OGR woshothi
Khona-ke ukhetha amafayela okuqala (umthombo), ukhetha i-kml format, nama-flame
Khona-ke, ngezansi ukhetha indawo (umgomo), bese ukhetha ukuthi uyabashintshela ku-shp
umbuzo ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ufake i-qgis Ngifuna ukwazi uma kungenzeka ukuguqula amafayela we-kml kuya shp nokuthi ngabe
NgoJulayi, i-2009 ku
Uqinisile iTuxcan, ijubane lenqubo ye-Qgis libonwa kangcono kune-gvSIG. Ukuze ube amathuluzi wamahhala, asekhulile kakhulu futhi manje ngalawa ungasebenza kungathi uhlelo lwangasese.
Ngithanda kakhulu kokubili amaphrojekthi we-GvSIG kanye ne-Quantum GIS, okubili okuthembisa izici eziningi nezakhiwo kwimisebenzi ye-GIS. Kodwa-ke, ngezinye izikhathi ukuhamba kancane kwezicelo ze-JAVA, okungafani kancane kusuka ku-interface ye-QGIS ecacile, kumele kugcizelelwe. Into enkulu nge-QGIS yiPython API yayo yokuhlela izinhlelo zokusebenza zedeskithophu, uxhumano lwayo ku-GRASS GIS nokusekelwa kwamafomethi ahlukahlukene. I-gvSIG I igcizelela ukusebenza kwayo okukhulu nge-SEXTANTE GIS kanye nezinketho ezinhle zokuxhumana kumadivaysi eselula, ukubukwa kwe-3D, ukushicilelwa, kodwa ngifakazela i-LENGTH ye-execution yayo. Kubuthakathaka bobabili amathuluzi ukubunjwa kwamabalazwe, ngoba kuze kube manje kuncane kakhulu. Ngicabanga ukuthi kuhle uma kungenzeka ukuthi kufaka phakathi amathuluzi wokuhlela we-KOSMO noma i-OpenJUMP, engiyitholile ephelele futhi enobungane.
Zombili amaphrojekthi zikhulu futhi zikhuthaze ngendlela engavamile isofthiwe yamahhala ye-GIS, yingakho inkululeko yesofthiwe, ukusivumela ukuba sikhethe amathuluzi ahlangabezana nezidingo zethu.
Ngokuzithoba, kuhle ukuthola ulwazi lwebhulogi yakho. . . Siyakuhalalisela kusuka ePatagonia Argentina